Mauto Otsvagira Zanu PF Rutsigiro
Kukadzi 09, 2011
Boka rehurumende rakabviswa zvichitevera chibvumirano cheGlobal Political Agreement, re Joint Operation Command, JOC, rinonzi ndiro rave kushandiswa neZanu-PF mukutsvagira bato iri rutsigiro musarudzo dzinonzi dzingangoitwe gore rino.
Boka iri raifanira kunge rakabviswa zvakaumbwa hurumende yemubatanidzwa, richitsiviwa ne JOMIC, asi richiri kusangana muchiwande.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZanu-PF vanoti Retired Air Mashal Henry Muchena ndivo vakanzi neJOC vaite mukuru mutsva weCommissariate yebato iri.
VaMuchena, avo vakaenda pamudyandigire neChishanu, vanenge vachitevedzerwa naVaSydney Nyanhongo, vaimbova Director General - Internal mubazi revasori reCIO.
VaMuchena nevamwe vavo vana vakasiya basa neChishanu vanosanganisa maMajor General maviri VaSibangamuzi Khumalo naVaEtherton Shungu, Colonel Resten Magumise naGroup Captain Sithabile Sibanda, avo vachange vachishanda neZanu-PF musarudzo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti VaMuchena nevamwe vavo vachange vachishanda nemauto anopfuura mazana matatu, vaimbova varwi verusununguko, uye vechidiki veZanu-PF. Vamwe vechidiki ava vanonzi vari kudzidziswa zvechiuto kuInkomo Army Barack. Vakuru muZanu-PF nemuchiuto vanoti dunhu rega rega richange riine mauto.
KuMashonaland West kunenge kuina Brigadier General David Sigauke, ukuwo Brigadier Douglas Nyikayaramba vanenge vari kuManicaland; Retired Bregadier General Victor Rungani vanenge vari kuMashonaland East; Vice Air Marshal Abu Basutu vanenge vari kuMatebeleland South.
Brigadier General Sibusio Busie Moyo vanenge vachifambisa basa kuMidlands, Retired Brigadier Khumalo kuMatebleland North, Retired Brigadier Shungu vanenge vari kuMashonaland Central. Colonel Chris Sibanda vanenge vari kuBulawayo, Air Commodore Mike Tichafa Karakadzai vanenge vari muHarare.
KuMasvingo, VaJabulani Sibanda vanonzi ndivo vanenge vakafanobata matomu sezvo Major General Engelbert Rugeje vanenge voenda kuSADC.
Zanu PF yakaita zvimwe chetezvo muna 2008 musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa.
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vati ichokwadi kuti VaMuchena vanenge vave kushandira bato. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaCharles Mangongera, vato zvoitwa neZanu-PF zvichaita kuti paite kugedageda kwemeno.
Hurkuro naVaCharles Mangongera